Mahafantatra sy tia antsika ny Raintsika any an-danitra sy ny Mpamonjy antsika, Jesoa Kristy. … Afaka mahatsapa ny Fitiavany sy ny fangorahany antsika isika mandritra ilay fijaliantsika.
Raha nihaona tamin’ireo rahavavy manerana izao tontolo izao izahay dia variana tamin’ny tanjaky ny fijoroanareo ho vavolombelona. Maro aminareo no taranaka voalohany mpikamban’ny Fiangonana na taranaka faharoa. Mahita rahavavy izahay izay manana antso maromaro, manao dia lavitra mba handehanana miangona ary manao fahafoizan-tena mba hanaovana sy hitandremana ireo fanekempihavanana masin’ny tempoly. Maneho haja anareo izahay. Mpisava lalan’ny Tompo amin’izao andro izao ianareo!
Vao haingana izay izaho sy ny vadiko, Mel no nihaona tamin’ny mpitondra mpitsidika miasa an-tsitrapo antsoina hoe Mollie Lenthal rehefa nitsidika tranom-bakoka iray tany Australie izahay. Fantatray tamin’izany fa i Mollie izay vehivavy 70 taona mahery maha-te ho tia dia tsy manan-janaka ary tsy mba nanambady mihitsy.Vavy tokana izy ary efa maty taona maro lasa ny ray aman-dreniny. Ny fianakaviana tena akaiky azy dia olona roa zanaky ny iray tampo amin’ny ny iray amin’ny rainy na ny reniny izay mipetraka any amin’ny kaontinanta hafa. Tampoka teo dia nanenika ahy ny Fanahy nijoro ho vavolombelona tamiko, tahaka ireny hoe ny Ray any an-danitra ireny mihitsy no niteny nanao hoe: “Tsy irery i Mollie! Zana ko vavy i Mollie! Rainy aho! Zanakavavy manan-danja ao amin’ny fianakavia ko izy ary tsy ho irery na oviana na oviana!!”
Ny tantaran’i Lazarosy no iray amin’ireo tantara tiako indrindra avy amin’ny fiainan’ny Mpamonjy. Manambara amintsika ny soratra masina hoe “Jesosy tia an’i Marta … sy ny rahavaviny [Maria] ary [ny rahalahiny] Lazarosy.”1 Nampilazaina i Jesoa fa marary mafy i Lazarosy, kanefa tsy nandeha nankany avy hatrany i Jesoa. Mbola nijanona roa andro fanampiny Izy, sady nilaza hoe: “izany aretina izany, … [dia] hampisehoana ny voninahitr’Andriamanitra, mba hankalazana ny Zanak’Andriamanitra.”2
Rehefa nandre i Marta fa ho avy i Jesoa dia “nandeha nitsena Azy”3 izy ary nilaza Taminy ny zava-nitranga. “Nilevina hefarana”4 i Lazarosy. Tao anatin’ny alahelo no nihazakazahan’i Marta nody tany an-trano mba hilaza amin’i Maria fa tonga ny Tompo.5 Nihazakazaka nanatona an’i Jesoa i Maria izay novesaran’ny alahelo ary niankohoka teo an-tongony sy nitomany.6
Nolazaina tamintsika hoe: “Ary Jesosy, nony nahita [an’i Maria] nitomany, … dia vonto ny fanahiny, ka tora-kovitra Izy,” ary nanontany hoe aiza no nandevenan’ireo azy.
“Dia hoy ireo taminy: Tompoko, andeha hizaha.”7
Ary dia mamaky ireo teny izay anisan’ny maneho fangorahana sy fitiavana be tokoa ao amin’ny soratra masina isika hoe: “Jesosy nitomany.”8
Nanoratra ny Apôstôly James E. Talmage hoe: “Ny fahitana ireo vehivavy roa novesaran’ny alahelo, … dia nahatonga an’i Jesoa ho nalahelo [niaraka tamin’izy ireo], ka vonto ny fanahiny ary sahiran-tsaina lalina Izy.”9 Izany zava-niseho izany dia mijoro ho vavolombelona mikasika ny fangorahana, ny fahalalana ara-po ary ny fitiavan’ny Mpamonjy, sy ny Raintsika any an-danitra antsika tsirairay avy isaky ny vesaran’ny ahiahy, ny ota, ny fahoriana sy ny fijalian’ny fiainana isika.
Ry rahavavy malala, mahafantatra sy tia antsika ny Raintsika any an-danitra sy ny Mpamonjy antsika, Jesoa Kristy. Fantatr’izy ireo rehefa ory sy mijaly isika. Tsy miteny Izy ireo hoe: “Tsy maninona raha mijaly ianareo ankehitriny satria atsy ho atsy dia hirindra ny zava-drehetra. Ho sitrana ianareo, na hahita asa ny vadinareo, na hiverina hody ireo zanakareo adala.” Mahatsapa ny hamafin’ny fijaliantsika izy ireo, ary afaka mahatsapa ny Fitiavany sy ny fangorahany antsika isika mandritra ilay fijaliantsika.